सोलुको ५२ वडामा कुन पाटीले कति जिते ? – Himal FM 90.2 MHz
सोलुको ५२ वडामा कुन पाटीले कति जिते ?
दोस्रो चरणमा भएको जिल्ला मध्ये सोलुखुम्बु पनि एक हो । ८ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ५ स्थानीय तहको नतिजा आउदा कांग्रेसले खाता खोल्न सकेको छैन् । ५२ वडा रहेको सोलुखुम्बुमा कुन पाटीले कति वडामा जित हासिल गरे । विजयी अध्यक्षको नाम सहित तालिका प्रस्तुत गरेका छौ ।
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको दुई वडामा माओबादी केन्द्रले जितेको छ । ५ वडा रहेको पालिकामा केन्द्रको वडा नं १ को अध्यक्षमा विकास कुलुङ र वडा नं ४ को अध्यक्षमा जयकुविर कुलुङको प्यानलै विजयी भएका हुन् । त्यस्तै, दुई वडामा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । वडा नं २ को अध्यक्षमा प्रदिप कुलुङ र वडा नं ३ मा डेक बहादुर राई नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको हो । यसैगरी वडा नं ५ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्धार सञ्चराम कुलुङ सहितको प्यानल विजयी भएको छ । महाकुलुङ गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा माओबादी केन्द्रका सागर किराती र नेपाली कांग्रेसकी विपना कुलुङ निर्वाचित भएका छन् ।
उता, माओबादी केन्द्रका उम्मेद्धार विजयी भएको लिखुपिके गाउँपालिकाका दुई वडामा कांग्रेसका उम्मेद्धारहरु विजयी भएका छन् । वडा नं १ मा ङवाङलाक्पा शेर्पा र वडा नं ५ मा ङिमाछिरी लामा सहितको प्यानल नै विजयी भएका हुन् । त्यस्तै, वडा नं ४ मा एमालेका उम्मेद्धार हिक्मत बहादुर सहितको टिम विजयी भएको छ भने वडा नं २ र ३ मा माओबादी केन्द्रका उम्मेद्धारहरु विजयी भएका छन् । वडा नं २ मा रमेश कुमार बस्नेत र वडा नं ३ मा पुन्य बहादुर बस्नेत अध्यक्ष पदमा विजयी भएका हुन् ।
यता, नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा नेपाली कांग्रेसको प्यानलै विजयी भएको छ । मतगणना जारी रहेको पालिकामा वडा नं १ मा अध्यक्षका उम्मेद्धार रमेश प्रसाद राई र वडा नं २ मा अध्यक्ष भेष कुमार बास्तोलाको प्यानलै विजयी भएका छन् । वडा नं ३ मा भने नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्धार धर्मध्वज खत्री सहितको प्यानलै विजयी भएको छ । ४ नं वडामा एमालेका कृष्ण कुमार राई नेतृत्वको प्यानलै विजयी भएको छ ।
सोलुखुम्बुको एकमात्र नगरपालिका सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको ३ वडामा कांग्रेसका उम्मेद्धारहरुले जित हात पारेका छन् भने, एउटा वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्धारहरु विजयी भएका छन् । वडा नं १ मा कांग्रेसका छोङबा लामा शेर्पा, वडा नं ९ मा कांग्रेसकै काजी शेर्पा विजयी भएका छन् । त्यस्तै, वडा नं २ मा पनि कांग्रेसकै मिङमारदोर्जी शेर्पा सहितको प्यानल विजयी भएको छ । १० वटा वडा रहेको नगरपालिकाको १० नं वडामा नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्धार मिङमारछिरी शेर्पा विजयी भएका छन् । त्यस्तै, नगरपालिकाको वडा नं ३ मा एमालेका गोपाल राना मगर अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । वडा नं ८ केरुङमा अध्यक्षमा एमालेका पासाङ कटवाल सहित प्यानलै विजयी भएका छन् । नगरपालिकाको वडा नं ४ मा कांग्रेसका अध्यक्षका उम्मेद्धार दावागेलु पाख्रिन राजु सहितको प्यानल विजयी भएको छ । भने वडा नं ७ मा एमालेका लालमान श्रेष्ठ सहितको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
उता, सोताङ गाउँपालिकाको वडा नं १ मा कांग्रेसका उम्मेद्धारहरु विजयी भएका छन् । सो वडामा जंग बहादुर गुरुङको कांग्रेस प्यानल विजयी भएका हुन् । वडा नं २ मा माओबादीका उम्मेद्धारहरु विजयी भएका छन् । उक्त वडामा तारा कुमार राईको प्यानलै विजयी भएको हो । त्यस्तै, वडा नं ३ मा नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको छ । सो वडावाट दाताराम गोतामे सहितको एमाले प्यानल विजयी भएको छ । ४ नं वडामा पनि एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्धार राम कुमार रार्ईको प्यानल नै विजयी भएको छ । त्यस्तै, ५ नं वडामा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्धार पृथ्वी बहादुर थापाको टिम नै विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै खुम्बुपासाङल्हमू गाउँपालिकाको १ नं वडामा एमालेले जित हासिल गरेको छ । सो वडावाट ङिमा दोर्जी शेर्पाको प्यानलै विजयी भएको हो । त्यस्तै, वडा नं २ मा आङ फुर्वा शेर्पा र ३ नं वडामा पनि एमाले अध्यक्षका उम्मेद्धार मिङमाछिरी शेर्पा विजयी भएका छन् । यसैगरी वडा नं ५ मा एमालेकै उम्मेद्धार छिरिङ पेन्जो शेर्पा सहितको प्यानलै विजयी भएका छन् । वडा नं ४ मा पनि एमालेका उम्मेद्धार लक्ष्मण अधिकारी सहित प्यानल नै विजयी भएको छ ।
यता, दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नं १ मा माओबादी केन्द्रका अगम कुमार राई विजयी भएका छन् भने एमालेको वडा प्यानल दुई वडामा विजयी भएका छन् । वडा नं २ मा तेज बहादुर थापा मगर र वडा नं ४ मा डबलसिं राईको प्यानलै विजयी भएका हुन् । सोहि गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा मिश्रीत नतिजा आएको छ । अध्यक्षमा एमालेका निमराज तामाङ सहित कांग्रेसका सदस्य मिश्रीत नतिजा आएको हो । वडा नं ३ मा एमालेका उम्मेद्धार नारायणकाजी कार्की सहित प्यानलै र वडा नं ७ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्धार सगुजित राई सहितको प्यानलै विजयी भएको छ । वडा नं ६ मा भने कांग्रेसका दिनेश कुमार राई विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै, दुधकौशीका गाउँपालिका अन्तरगत वडा नम्बर १ मा नेपाली काग्रेसका अध्यक्षका उम्मेद्धार घनराज सुनुवार सहित प्यानलै बिजयी भएको छ । वडा नम्बर ८ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र अनुप्रसान्त राई सहित प्यानल नै बिजयी भएको छ । त्यस्तै, वडा नम्बर ९ अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका भुपाल सिं राई सहित प्यानल नै विजयी भएको छ ।
अब ९ वटा वडाको मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ । नेचासल्यान गाउापालिका अन्तरगत ६ नं वडामा मतदान नै भएको थिएन ।